I-Samsung Galaxy Fold: iFixit inyanzelwe ukuba irhoxise inqaku layo | I-Androidsis
I-Samsung inyanzela iFixit ukurhoxisa ukungangqinelani kwayo kwi-Samsung Galaxy Fold
Izinto azihambi kakuhle kwi-Samsung mva nje. Inani elikhulu labasebenzisi abaye banakho ukufikelela kwifowuni yakho yokusonga bebesoloko benika ingxelo ngeengxaki zepaneli, ezigqibela ziphukile okanye zineengxaki. Nditsho nabafana abakwi-iFixit, iingcali zokudibanisa izixhobo, babekwazi ukufikelela kwifayile ye- Samsung Galaxy Fold y ubonise izizathu zokuba kutheni isikrini sakho siqhekeka.
Kodwa kubonakala ngathi umenzi waseKorea khange onwabe kakhulu ngohlalutyo lwabo lwesiphelo kwaye babacelile ukuba bayiphelise le disassembly yesiphelo. Hayi, abakhange bayenze ngokuthe ngqo, kodwa bacele umthengisi onikezela ngeefowuni kwiqela le-iFixit, kwaye sonke siyayazi ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba bayala.
Ewe, i-Samsung inyanzelise iFixit ukuba isuse inqaku malunga ne-Samsung Galaxy Fold
Iphothifoliyo ye-iFixit iqhuba ngokungahambelani kwazo zonke iiterminal ezibekwe phambi kwazo ngenjongo yokuba abasebenzisi bazi indlela yokuzilungisa kwimeko yokubandezeleka kwalo naluphi na uhlobo lwengozi. Ngale ndlela, banikezela ngamathuba okulungisa i-smartphone okanye ithebhulethi yakho ngaphandle kokuyisa kwinkonzo yezobugcisa. Kodwa kule meko, ubuncinci okwangoku, ukuba uthenga i-Samsung Galaxy Fold, ngekhe uyazi ukuba ungayilungisa njani.
Ngokusebenzisa ingxelo kwiwebhusayithi yayo, iqela le-iFixit lithumele oku kulandelayo: «Iqabane elithembekileyo lisinike iyunithi yeGlass Fold. Isamsung icelile, ngokusebenzisa iqabane, ukuba iFixit isuse i-teardown yayo. Akukho mfuneko yokuba sisuse uhlalutyo lwethu, olusemthethweni okanye ngolunye uhlobo. Kodwa ngenxa yentlonipho yeli qabane, esimbona njengehlakani ekwenzeni izixhobo zisebenze ngakumbi, sikhetha ukurhoxisa ibali lethu de sithenge iGolden Fold.
Ngamanye amagama: I-Samsung iya kuba isongele umthengisi othembekileyo we-iFixit, kwaye i-portal ikhethe ukuphelisa inkqubo ye I-Samsung Galaxy Fold yehla ukuze ungalimazi ngakumbi iqabane lakhe elinokuthi livaliwe kwi-Samsung. Kuyinyani ukuba umenzi waseKorea uyibonile impazamo kwisiphelo sayo, ukuya kwinqanaba lokumisa ukumiselwa kwesipheloKodwa kuyinyani ecacileyo ukuba le ntshukumo yamva nje ayizukuxhamla umfanekiso webrand kwaphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung inyanzela iFixit ukurhoxisa ukungangqinelani kwayo kwi-Samsung Galaxy Fold
Usebenzisa njani izaziso ezenzelwe wena kuWhatsApp